Taxanaha Caafimaadka Maskaxda ee Prince Harry Si Uu Ugu Tababarro Telefishanka Apple + Gu'gan | Waxaan ka socdaa mac
Cudurka faafa ee coronavirus wuxuu curyaamiyay tiro badan oo mashaariic maqal ah oo taxane ah, filimo, dokumentiyo ... dib u dhigista duubista iyo hordhaca inbadan oo kamid ah. Mid ka mid ah mashaariicda ficil ahaan waa la curyaamiyay isla markii ay bilaabatayba waxay ahayd taxane dokumenti ah ee Prince Harry (Duke of Sussex) iyo Oprah Winfrey.
Taxanaha taxanaha ah ee uu abuuray Amiir Harry iskaashiga oprah Waxaa loo qorsheeyay in lagu soo bandhigo Apple TV + sanadka 2020, si kastaba ha noqotee, iyadoo ay ugu wacan tahay faafida coronavirus iyo joojinta waajibaadka qoys ee ka dhaxeeyo qoyska reer boqor ee Amiirka ah, ayaa ugu dambeyn la soo saari doonaa guga.
Sida laga soo xigtay warbaahinta Ingiriiska Sun, qaar badan ayaa ahaa waxyaabaha saameynta ku yeeshay soo saarista silsiladan, maahan kaliya coronavirus. Go'aanka Harry iyo xaaskiisa, ee ah inay joojiyaan inay ficil rasmi ah u sameeyaan Qoyska Boqortooyada Ingiriiska bishii Maarso 2020 iyo wareejintii ay ku yimaadeen Mareykanka, sidoo kale waxay gacan ka geysteen dib u dhigista mashruucan.
Bishii Abriil 2019, wada shaqeynta Prince Harry ee Oprah iyo Apple TV + si loo abuuro taxane ku saabsan ceebta dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda. Ku dhawaaqida taxanahan waxaa amiirradu ku sameeyeen bartooda Instagram, oo ah taxane dokumenti ah oo wax ka qaban doona dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda ee adduunka oo dhan, kuma koobna oo keliya Boqortooyada Ingiriiska.
Amiir Harry wuxuu dhowr bilood ka hor sheegay in:
Waxaan si daacad ah u aaminsanahay in caafimaadka maskaxda ee wanaagsan - jirdhis maskaxeed - ay fure u tahay hoggaan awood leh, bulshooyinka wax soo saar leh, iyo ujeedo ujeeddo leh. Waa mas'uuliyad aad u weyn in la helo xuquuqdan maadaama aan kuu soo qaadanayno xaqiiqooyinka, sayniska, iyo ka warqabka arrin la xiriirta maalmahan.
Rajadeennu waxay tahay in taxanahani uu yahay mid wanaagsan, iftiiminaya oo loo wada dhan yahay - wadaagista sheekooyinka adduunka ee ruux aan la soo koobi karin oo ka dagaallamaya meelaha ugu mugdiga badan, iyo fursad aan si fiican ugu fahmi karno nafteena iyo kuwa inagu xeeran. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan la shaqeynayo Oprah taxanahan muhiimka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Amiir Harry taxane ku saabsan caafimaadka maskaxda si uu ugu tababaro Apple TV + guga
Apple Music waxay ku dareysaa qayb cusub: Fitness +
App amphetamine waa inuu badalaa magaca hadii uu doonayo inuu kusii jiro Mac App Store